Shaxda 10 Microsoft Shahaadooyinka laga rabo maanta 2018 | ITS Tech School
Shahaadooyinka Microsoft ee dalbashada Maanta: Nidaamka shaqada Windows ee Microsoft waa barnaamijka ugu ballaaran ee loo adeegsado adduunka oo dhan iyo dad badan oo ka mid ah PC-yada ku shaqeeya OS, waxay keentay in MS loo dhiso tiknoolajiyada taageeraya qalabyada, horumarinta codsiga iyo marin dariiqa si loo waafajiyo baahida horumarinta.
Laga soo bilaabo xirfad-raadiye raadiye ama farsamo, si wax ku ool ah u dhameystiraya mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna badan ee loo raadsado shahaadooyinka Microsoft ee 2018 ayaa siin doona qaab xirfadeed oo horay loo sii marin lahaa maaddaama mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka lagu aqoonsado OS-da ururka uu abuuray. Waxaad ka heli kartaa shahaadooyinkaas oo aad raadineysaa kuwa ugu haboon ee ku filan mustaqbalka.
Shahaadada 10 Microsoft Shahaadada sare
1. Khabiir Sameeyaha Sayniska ah ee Microsoft (MCSE): Kaabayaasha Server:
Infrastructure MCSE Server waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo in khabiirku leeyahay awooda ugu muhiimsan ee kormeerida iyo hannaanka qaabka adeegga waraaqaha. Qofku wuxuu yeelan doonaa waxbarasho taxaddar leh oo ku saabsan maareynta astaamaha iyo maareynta qaab-dhismeedka, dhejinta, maamulka nidaamyada iyo kaydinta macluumaadka. Markaad si wax ku ool ah u dhameysato koorsada, waxaad qaybta shaqada u soo iibsan kartaa khabiir ku taageeraya ama sida xogta amniga xogta. Waa waajib in la dhammeeyo shan imtixaan oo gaar ah oo maskaxda lagu hayo ujeedada ugu dambaysa ee u qalanto.
2. Naqshadeeyaha Shahaadada Sameeyey ee Microsoft (MCSD)
Muddadii ay barnaamijyadan kala duwan u muuqdaan inay noqdaan kuwo faafsan, helitaanka shahaadada MCSD waxay caddaynaysaa in heysta markhaatigu uu yahay soo saaraha codsiyada khibrada leh ee samayn kara barnaamijyada hadda la qaadan karo. Waxay sidoo kale awood u yeelan karaan in ay dhistaan ​​codsiyada websaydhka, maamulayaasha aasaasiga ah ee maareynta da'da cusub. Barnaamijku wuxuu kaa filayaa in aad dhammeystirto wargeyska 'Universal Windows Platform' iyo 'App Builder' ka hor intaadan raadin maadooyin kale oo horumarsan.
3. Microsoft Soodhawaynta Soodhawrka La '(MCSA): Windows Server 2016
Kala duwanaanshaha ugu dambeeyay ee barnaamijka la heli karo, shahaadada MCSA waxay awood u leedahay in ay noqoto mid lala xisaabtami karo wax ka qabashada Windows Server 2016 iyo hababka la xiriira. Nin si fiican u dhamaystiraya koorsada waxaa loo balan qaadayaa in ay heleen barashada maareynta xogta, maamulka maamulka iyo hagaajinta. 2016 waxqabadku wuu cusboonaysiiyaa kuwa hadda sida ay u ansixiyeen fikradaha hadda iyo barnaamijyada casriyeynta ee Windows Server. Waqtiga dambe, Microsoft wuxuu ka qeyb qaataa koorasyo ​​kala duwan oo bixiya kordhin dheeri ah si aad waqti dheer ugu qaadato guud ahaan guud ahaan qulqulka. Haddii ay dhacdo inaad isku daydo inaad dhammaan daboolto, waxaa lagama maarmaan ah inaad sameysid dhammaan koorsooyinka la xiriira Server-ka ee Windows oo leh ujeedo qaas ah oo ah inaad u qalanto sida takhasus leh ee ku yaal xaafadaada.
4. Khabiir Sameeyaha Sayniska ah ee Microsoft: Istaraatiijiyada Macluumaadka
Si wax ku ool ah u dhammaystirta shahaadada MCSE ee Xogta Macluumaadka, waxaad u sheegi kartaa ganacsiyada yaryar ee aad si xirfad leh ula macaamilayso maamulka adeegga sirta ah iyo kormeerida nidaamyada xogta miisaaniyada ee macaamiisha kuwaas oo ah maskax ku habboon dadka kale. Shahaadada waxaa kale oo ay u sheegeysaa ururada in caddaynta caddayntu ay maareyn karto xogta labadaba dariiqyada iyo dhismaha labadaba. Wadarta shan imtixaan oo kala duwan waa in la dhammeeyaa oo waxaad weliba ku dari kartaa wakhti muhiim ah guud ahaan agagaarkaaga qeexaya qeexitaanka SQL Server.
5. Microsoft MCSE: Darawallada Daruuriga ah iyo Kaabayaasha
Microsoft waxay leedahay faylka shahaadeynta ee shahaadooyinka si loogu suurtageliyo dadka inay u helaan waayo-aragnimo wax-ku-ool ah gaar ahaan meelaha horumarinta. Darwiishada Cloud iyo Infrastructure waxay xaqiijineysaa inaad si wax ku ool ah ula macaamilayso daruuraha iyo xogta diiradda la saaro Microsoft oo ka faa'iideysata horumarinta kala duwan. MS Azure waa mid taagan oo ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee dariiqa la siiyo macaamiisha iyo adoo helaya marxaladda, waxaad kordhin kartaa qiimaha ururka oo wax ka qabta hantidooda.
6. Xarunta Microsoft System - Maamulida Maamulaha Maareynta Nidaamka Xarunta iyo Intune
Markaad ogolaato inaad aqbashid Maamulaha Maareynta Nidaamka Maamulida Xarunta iyo Intune, koorasku wuxuu bixin doonaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee madaxa agaasinka iyo barnaamijka Microsoft Intune. Wuxuu ku darayaa macluumaadka habka ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo hawlaha maalinlaha ah, maaraynta barnaamijka, haynta kaydka labada qalab, barnaamijka, qaadashada daryeelka codsiyada iyo isuduwidda macluumaadka la soo saaray Intune. Shahaadadaas waxay sidoo kale u egtahay mid isku mid ah, amniga sugida, oo soo saarta warbixinno.
7. Microsoft Exchange Server: Diyaarinta iyo Qaybinta Microsoft Exchange Server 2016
Qaab-dhismeedka dheer ee koorsooyinka ay bixiso Microsoft waa xirfad faa'iido leh oo la kordhiyo dadka raadinaya qaybo shaqeynaya. Markaad si fiican u dhammaato axdigan, waxaad kordhinaysaa qiimaha ururkiinna adigoo haysta karti aad ku qorsheynayso Microsoft Exchange Server 2016 sida ku cad shuruudaha khaaska ah iyo u dir. Codsaduhu waa inuu haystaa wax ka yar seddex sano oo waayo-aragnimo ah oo la shaqeynaya macaamiisha Exchange iyo marka ay dhammeeyaan kan, waxay awood u yeelan doonaan inay hoggaamiyaan koox madax ah oo leh barashada oo lagu soo ururiyey waraaqo imtixaan oo kala duwan kuwaas oo qayb ka ah koorsadan.
8. Microsoft Xafiiska 365: Xafiiska iyo Maamulka Xafiiska 365
Microsoft Office oo loo isticmaalo barnaamij madaxbannaan ayaa loo bedelay maamulka xubinimada oo leh Microsoft Office 365. Khabiirada IT waxay ogaan karaan dhammaan barnaamijyada Xafiiska 365 oo ay ku jiraan xaaladahooda, baahiyaha iyo shakhsiyaadka. Marka ay leeyihiin barasho ballaaran oo ku saabsan taageeridda horumarka iyo awood u leh inay si buuxda u baaraan natiijooyinka ka iman kara barnaamijka, waxay si wanaagsan u isticmaali karaan Powerpoint, Excel, Word mashaariic kala duwan. Intaa waxaa dheer, waa barnaamij aasaasi ah oo si aad ah u yareeya boggling kala geddisan oo leh server kale oo SQL ah iyo tijaabooyinka Azure Cloud-ku salaysan oo aad ku iibsan karto adiga oo dhammeynaya waxyaabaha muhiimka ah.
Ka hor intaadan qaadin imtixaanka shahaadada ee Microsoft ee ASP.Net, waa khasab in aan ka yareyn shan sano oo kaqaybqaadashada marxaladda. Marka aad fursad u leedahay inaad abuurto barnaamijyo isticmaalaya ASP.Net oo laga yaabo in ay labo waqti oo qibrad ah u qaataan qaadashada tallaalka MVC ku salaysan, waa in ay noqoto mid aad u yar oo dalbanaya helitaanka shahaadada MVC 5. Cadeyntu waxay qirtaa macluumaad ku saabsan qaabeynta, gudbinta, iyo dhisida macaamiisha kulankooda iyada oo la isticmaalayo injineernka alaabta. Sida barnaamijyo kale oo badan oo shahaadoyin ah, waxaad u baahan tahay inaad si wax ku ool ah ugu gudubto waraaqaha imtixaanka oo leh ujeedo gaar ah oo udubdhexaad ah si aad ugu qalanto sida arrin khuseysa. Maaddaama ay u baahan tahay macluumaad guud oo ku saabsan .Net, ASP.Net iyo MVC 5, isla mar ahaantaas, waxaa loo maleynayaa in ay tahay dhib badan oo macquul ah khabiiro khibrad leh oo doonaya in ay ka caawiyaan xirfadahooda.
10. Microsoft Soodhawrka La Soodhafay: Microsoft SQL Server 2016
Marka aad si fiican u buuxiso shahaadada MCSA ee SQL Server 2016, waxaa la fahamsan yahay in aad haysatid macluumaad muhiim ah oo muhiim ah si ay ula macaamilaan xogta SQL ee daruuriga iyo dhismaha sida ururku u filayo. Microsoft waxay leedahay qayb ka mid ah qaybta dambe ee shahaadada ee nidaamyada kala duwan ee loo yaqaan 'SQL 2016 database', Maamulka Database iyo BI Development. Khabiirada haysta shahaadada SQL waxay leeyihiin bedelaad khibrad gaar ah oo ka mid ah mawduuc gaar ah oo loogu talagalay qaybo shaqo oo gaar ah iyo horumarinta xirfadda ama waxay qaadan kartaa baaritaanno kala duwan marka ay dhacdo in ay wax ka qaban karaan ladnaanshaha la xidhiidha.